यस्तो ठाउँ, जहाँ मानिसले मात्र होइन कुकुर र बिरालोले पनि रक्तदान गर्छन् - Jagaran News Jagaran News
Published On : 18 January, 2020 5:08 pm
काठमाडौं , माघ ४ । रक्तदान गर्नु निकै राम्रो कुरा हो । मानिसहरुले रक्तदान गरेर अरुको जीवन बचाइरहेका छन् । हामिले मानिसहरुले मात्र रक्तदान गरेको देखेका छौं । तर अमेरिकामा कुकुर र बिरालोले पनि रक्तदान गर्ने गर्छन् । अमेरिकामा कुकुर बिरालाको रगत बैंकको स्थापना पनि गरिएको छ ।
यस बैंकमा कुकुर र बिरालोको रगत जम्मा गर्ने गरिन्छ । धेरैले घरमा बिराले र कुकुर पालेका हुन्छन् । कुनै कुकुर वा बिरालो बिरामी परेमा रगतको आवस्यक पर्छ । ब्लड बैंकमा रहेको अरु कुकुर तथा विरालोको मिल्दो रगत काम लाग्दछ ।
कुकुरमा १२ र बिरालोमा ३ प्रकारको रक्त समूह हुन्छ । रगतको कमी भएमा धेरैले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको डिक्स तथा गार्डन ग्रोभ सहरका ब्लड बैंकमा रगत लिन जाने गर्छन् । अमेरिकाका धेरै ठाउँमा पशु ब्लड बैंक रहेका छन् । यहाँ पशुको रक्तदान गराउछन् ।
के हो हैजा, कसरी बच्ने?
काठमाडौं, असार १५ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा हैजाको संक्रमण देखिएको छ। योसँगै मानिसहरुमा यसले
यस्ता छन् आँप खानुका फाइदाहरू !
काठमाडौं, जेठ २७ । ‘फलफूलको राजा’ को नामले चिनिने आँप स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै फाइदाजनक फल
लाग्छ लाग्छ आँशुको सराप पक्का लाग्छ !
मुक्तकः लाग्छ लाग्छ आँशुको सराप पक्का लाग्छ !! ढिलो चाडो होला समय घुमी फेरि आफैतिर
डा.दास मधेश प्रदेशकै उत्कृष्ट चिकित्सक
काठमाण्डौ, १४ चैत । पर्सा स्थित नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा। सरोज रोशन